Actorylọ ọrụ Castil preseasoned Skillet - China Cast Iron preseasoned Skillet emepụta, ndị na - enye ya
Ihe Ngwaahịa: JT 172 Ihe: Cast Iron preseasoned Size: 23.3 * 1.8 mbukota: igbe onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja Ikwadebe tupu ị nweta nri dị elu, ijide okpomoku dị elu na-eguzogide ike maka ojiji na stovetop, oven, bbq, ma ọ bụ mpụga ọkụ, nchekwa na ntanetị 500 ogo zuru ezu maka njigide ziri ezi ma chekwaa Integrated wụsa spouts maka ị nweta mmanụ na griiz n'ụzọ dị mfe.
Ihe Ngwaahịa: HF 074 ， HF 075 Ihe: Cast Cast Preseasoned Size: DIA: 13 ， DIA: 15.5: igbe onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja Ikwalitere tupu ebe a na - esi nri dị elu, ijigide ọkụ na - adị ogologo na - eguzogide ike na - eguzogide ike maka iji. stovetop, oven, bbq, ma ọ bụ ebe a na-agba ọkụ, ihe na-adịghị mma maka ogo 500 nke ogo maka njigide ziri ezi ma dị nchebe Integrated wunye spouts maka ị nweta mmanụ na griiz n'ụzọ dị mfe.
Ihe Edere Ihe: JT8 孔 Ihe: Cast Iron Preseasoned Size: 18.5 * 3.8 igbe: onyinye igbe ma ọ bụ igbe agba aja aja Idozi nri eji eme Oge dị elu, ijigide okpomoku dị elu na-eguzogide ọgwụ maka stovetop, oven, bbq, ma ọ bụ mpụga ọkụ, nchekwa na ntanetị 500 ogo zuru ezu maka njigide ziri ezi ma chekwaa Integrated wụsa spouts maka ị nweta mmanụ na griiz n'ụzọ dị mfe.
Ihe Ngwaahịa: JT70B, JT 71B, JT 72B Ihe: Cast Cast Preseasoned Size: 16 * 3.3, 19.5 * 3.9, 26 * 5.4 Nkwakọ ngwaahịa: igbe onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja Ikwadebe tupu ị nweta nri na - enweghị isi -enwe ihe na-eguzogide maka iji ya na stovetop, oven, bbq, ma ọ bụ ebe a na-ere ọkụ, nchekwa na ntanetị 500 ogo zuru oke maka njigide ziri ezi ma dị nchebe Integrated wunye spouts maka ị nweta mmanụ na mmanụ dị mfe.
Ihe Ndepụta Ngwaahịa: Ihe JT: Cast Iron Preseasoned Size: 26.7 * 7.9 na-eburu ya: igbe onyinye ma ọ bụ igbe agba aja aja Ikwadoro oge eji esi nri dị elu, ijigide okpomoku longerNdị ọkụ na-eguzogide ike maka ojiji na stovetop, oven, bbq, ma ọ bụ mpụga ọkụ, nchekwa na ntanetị 500 ogo zuru ezu maka njigide ziri ezi ma chekwaa Integrated wụsa spouts maka ị nweta mmanụ na griiz n'ụzọ dị mfe.
Ngwaahịa aha nkedo ígwè skillet setịpụrụ dayameta 20cm, 25cm, 30cm dị elu 5cm, mkpuchi mkpuchi preseasoned igbe agba aja aja ma ọ bụ igbe agba akara ahaziri ahaziri ikike Superb okpomọkụ njigide kpo oku Kwesịrị ekwesị maka stovetops zuru oke maka isi nri na ijere akụkụ ụfọdụ nke akwụkwọ nri, akụkụ, na ihe ọseụ Providụ Na-enye enweghị atụ. njigide okpomọkụ na ọbụna ikpo ọkụ; mkpuchi akàrà na ekpomeekpo ebe ejiri aka na - enye ohere maka ibufe FDA nke akwadoro tupu oge eji eme ihe na - enye ohere iji ya mee ihe ngwa ngwa nwere ike ịbụ ...